Dhamaadku waa bilow cusub, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Haddii aysan jirin wax mustaqbal ah, Bawlos wuxuu qoray, inay nacasnimo tahay in Masiixa la rumeeyo (1 Korintos 15,19). Sheegiddu waa qayb muhiim ah oo aad u dhiirigelisa iimaanka Masiixiyiinta. Wax sii sheegidda Baybalka ayaa inoo sheegaysa wax aad u rajo leh. Waxaan ka soo qaadan karnaa xoog iyo geesinimo hadii aan diirada saarno fariimaheeda muhiimka ah, ee aan aheyn faahfaahinta lagu murmi karo.
Waxsii sheegiddu ma aha dhammaad lafteeda - waxay qeexaysaa run sare. Waxaa loola jeedaa, in Ilaah la heshiiyo aadanaha isaga, Ilaah; inuu dembiyadeenna inaga cafiyo; inuu isagu saaxiibbo naga dhigo mar labaad. Xaqiiqadan waxay ku dhawaaqdaa sheegidda. Wax sii sheegistu ma aha oo kaliya in la saadaaliyo dhacdooyinka, laakiin si loo tixraaco Ilaah. Wuxuu noo sheegayaa qofka Ilaah yahay, wuxuu yahay, wuxuu sameeyo iyo waxa uu inaga rajeeyo inaga. Sheegiddu waxay dadka ugu yeeraa inuu la heshiisiiyo Ilaah isagoo rumeysan Ciise Masiix.
Waxsii sheegid badan oo gaar ah ayaa rumoobay waqtigii Axdigii Hore, oo waxaan filan karnaa wax intaa ka sii badan. Laakiin wax sii sheegidda oo dhan, diiradda ayaa ku jirta wax gabi ahaanba ka duwan: madax furasho - cafiska dembiyada iyo nolosha weligeed ah ee ku timaadda Ciise Masiix. Waxsii sheegiddu waxay ina tuseysaa in Eebbe yahay tusaha taariikhda (Daanyeel 4,14); waxay xoojisaa aaminsanaanta Masiixa (Yooxanaa 14,29) wuxuuna ina siinayaa rajo mustaqbalka (1Th4,13-18).
Muuse iyo nebiyadii waxay qoreen wax ku saabsan Masiixa, iyo waxyaabo kale, oo ah in la dilo oo la sara kiciyo (Luukos 24,27:46 iyo). Waxay sidoo kale saadaalinayaan dhacdooyinka ka dib sarakiciddii Ciise, sida injiilka ku wacdiyaya (Aayadda 47).
Waxsii sheegiddu waxay ina tilmaamaysaa badbaadada Masiixa. Hadaanan taas fahmin, wax sii sheegiddu annagu faaido maleh. Keliya Masiixa ayaan ku geli karnaa boqortooyada oo aan dhamaadka lahayn (Daanyeel 7,13: 14-27 iyo).
Baybalku wuxuu shaaca ka qaadayaa soo laabashada Masiixa iyo Xukunka Ugu Dambeeya, wuxuu ku dhawaaqayaa ciqaab weligeed ah iyo abaalmarin. Marka sidaas la sameeyo, waxay dadka u muujineysaa in badbaadadu ay lama huraan tahay isla mar ahaantaana badbaadada ay si nabad ah ku imaan doonto. Waxsii sheegiddu waxay noo sheegaysaa in Ilaah nala xisaabtami doono (Yuudas 14-15) wuxuu doonayaa inuu na furto (2Pt3,9) iyo inuu isagu horay noo soo furtay (1 Yooxanaa 2,1: 2). Waxay noo xaqiijineysaa in sharka oo dhan laga guuleysan doono, in caddaaladdarrada iyo silica oo dhan ay dhammaan doonaan (1 Korintos 15,25:21,4; Muujintii).
Sheegiddu waxay xoojisaa qofka rumaysta: waxay u sheegaysaa in dadaalkiisu aanu micno lahayn. Waxaan ka badbaadi doonnaa silica, waxaan noqon doonaa xaq iyo abaal marin. Waxsii sheegiddu waxay ina xusuusineysaa jacaylka Ilaah iyo aaminnimadiisa waxayna naga caawisaa inaan sii aaminno (2 Butros 3,10: 15-1; 3,2 Yooxanaa 3). Iyada oo ina xusuusineysa in dhammaan khasnadaha maaliyadeed ay yihiin kuwo isku mid ah, wax sii sheegiddu waxay nooga digayaa in aan qadarinno waxyaalaha Ilaah weli la arki karo iyo xiriirka aan weligiis la leenahay isaga.
Sekaryaah waxaa loola jeedaa wax sii sheegidda oo loogu yeero wacitaanka tawbadkeenka (Zakariah 1,3-4). Ilaah wuu ka digayaa ciqaab, laakiin wuxuu filanayaa qoomamo. Sida ku cad sheekada Yoonis, Ilaah wuxuu diyaar u yahay inuu ka noqdo ogeysiisyadiisa markay dadku u toobad keenaan. Hadafka waxsii sheegiddu waa in la inoogu beddelo Ilaaha, kaasoo mustaqbal wanaagsan inoo leh; inaanaan ku qancin saxnimadayada, inaan ogaano "sirta".
Sidee waxsii sheegista Baybalka loo fahmi karaa? Kaliya taxadar weyn. Wax sii sheegidda macnaha "taageerayaasha" ayaa injiilka ku tuuray saadaalinno been ah iyo khiyaanayn qaldan. Sababta oo ah ku-xadgudubka noocaas ah ee wax sii sheegidda, dadka qaar waxay ku jees jeesaan Kitaabka Quduuska ah, xitaa waxay ku jees jeesaan Masiixiisa qudhiisa.Lahmada saadaasha ee fashilantay waa inay noqotaa digniin miyir qabta in rumeysiga shaqsi uusan dammaanad qaadeynin runta. Sababtoo ah marin-habaabinta waxay wiiqi kartaa aaminaadda, waa inaan taxaddar muujino.
Waa inaanu u baahan saadaalin macquul ah oo aan si dhab ah ugu dadaalno koritaanka ruuxiga ah iyo nolosha Christian. Aqoonta waqtiyada iyo faahfaahinta kale (xiitaa haddii ay u roonaadaan inay saxan yihiin) dammaanad kama aha badbaadada. Diiradeena annagu waa inay ahaato Masiixa, ee ma aha barwaaqada iyo qasaarooyinka, ha ahaato ama tan quwada adduunka waxaa loo tarjumi karaa "xayawaan".
Tusaalaha tusaale ahaan luuqadda calaamadaha: Sabuurka 18-aad. Qaab gabayo ah ayuu u sharraxay sida Ilaah uga badbaadinayo Daa'uud cadaawayaashiisa (Aayadda 1). Daauud wuxuu adeegsadaa calaamado kaladuwan tan: Ka bax meesha dhabta ah (4-6), dhulgariir (8), saxeex cirka (10-14), xitaa ka badbaadinta dhibaatada (16-17). Waxyaabahan runtii ma dhicin, laakiin waxaa loo isticmaalay si astaan ​​ahaan iyo gabayo ahaan muuqaal ahaan si loo muujiyo xaqiiqooyinka qaarkood loona sameeyo "wax muuqda". Tani waa waxa waxsii sheegistu sameeyaan.
Ishacyaah 40,3: 4-3,4 waxaay ka hadlaysaa in buuraha la carqaladeeyo, jidad la sameeyo - taasi micnaheedu maahan macno ahaan. Luukos 6 waxay muujineysaa in wax sii sheegiddan uu rumaystey Yooxanaa Baabtiisaha. Ma aysan aheyn buuraha iyo wadooyinka gabi ahaanba.
Yoo'eel 3,1: 2 wuxuu saadaaliyay in Ruuxa Ilaah lagu soo daadin doono “binu-aadmiga oo dhan”; sida laga soo xigtay Peter, tan waxaa horay loogu dhammaystiray dhowr iyo toban dad ah maalintii Bentakostiga (Falimaha Rasuullada 2,16: 17). Riyooyinkii iyo riyooyinkii Yoo'eel wax ka sii sheegay waxay galaan faahfaahin kasta oo ku saabsan sharraxaaddooda jidheed. Laakiin Butros uma baahna in calaamadaha dibedda lagu waafaqo shuruudaha xisaabaadka - annaguna sidaas ma aha. Haddii aan wax ka qabaneyno sawirrada, markaa ma jiro soo-galid ku saleysan dhammaan faahfaahinta sheegidda oo la filayo.
Arimahani waxay saameeyaan sida dadku u tarjumaan wax sii sheegidda Baybalka. Hal akhristaha waxaa laga yaabaa inuu doorbido fasiraadda suugaaneed, midka kalena waa tusaale, oo waa suuro gal ma noqon karto in la caddeeyo midka saxda ah. Tani waxay nagu qasbeysaa inaan eegno sawirka weyn, ma ahan faahfaahinta. Waxaan eegnaa muraayadda la qaboojiyey, oo aan ku xirneyn muraayad wax lagu weyneeyo.
Ma jiro is afgarad Masiixi ah oo dhowr ah oo muhiim ah oo wax sii sheegidda ah. Sidaas ku guuleysan z. T. mowduucyada rayrayn, dhib weyn, millennium, dowlad dhexe iyo jahannamo fikrado aad u kala duwan. Fikradda shaqsi ahaaneed muhiim uma ahan halkan. In kasta oo ay qayb ka yihiin qorshaha rabbaani ah oo muhiim u ah Ilaah, ma aha lagama maarmaan in aan helno jawaabaha saxda ah oo dhan halkan - gaar ahaan maahan haddii ay beero khilaafaadka noo dhexeysa iyo kuwa si kale u fikiraya. Habdhaqankeenu wuxuu ka muhimsan yahay in aan ku maamulno qodobbada shaqsiyeed.
Laga yaabee inaan isbarbar dhig ku sii sheegno safar. Uma baahnin inaan ogaano halka yoolkeenu yahay, sida iyo heerka xawaaraha aan ku gaari karno. Waxa kaliya ee aan ubaahanahay waa aaminaada 'tusaha safarka', Ciise Masiix. Isaga ayaa ah kan keliya ee yaqaan Jidka, oo aan xaggiisa ayaynu ku dhumidnaa. Aynu ku dheganaano isaga - isagaa ilaaliya faahfaahinta. Annaga oo maanka ku hayna waxyaabahaas iyo waxyaalaha carbuuninta ah ee maskaxda ku haya, hadda waxaan dooneynaa inaan tixgelinno qaar ka mid ah caqiidooyinka Masiixiyiinta aasaasiga ah ee la macaamilaya mustaqbalka.
Dhacdada weyn ee muhiimka ah ee go'aamisa waxbaridayada ku saabsan mustaqbalku waa imaatinka labaad ee Masiixa. Waxaa jira ku dhowaad heshiis dhameystiran oo ah inuu soo laaban doono. Ciise wuxuu xertiisii ​​ku dhawaaqay inuu "soo noqon doono" (Yooxanaa 14,3). Isla mar ahaantaana, wuxuu uga digayaa xerta inay ka lumiyaan waqtigooda xisaabinta taariikhda (Matayos 24,36). Wuxuu dhaleeceeyay dadka u maleynaya in waqtigu dhow yahay (Matayos 25,1: 13), laakiin sidoo kale kuwa rumeysan dib u dhac dheer (Matayos 24,45: 51). Dhaqanka: Had iyo jeer waa inaan diyaarsanaano, had iyo jeer waa inaan diyaar u nahay, taasi waa mas'uuliyadeena.
Malaa'igahu waxay xertii u sheegeen: In alla intuu Ciise jannada yimid, wuu soo noqon doonaa (Falimaha Rasuullada 1,11). Isaga ayaa «naftiisa ku muujin doonaa ... samada iyo malaa'igaha xooggiisa olol olol ah» (2 Tesaloniika 1,7: 8). Bawlos wuxuu ugu yeedhay "muuqashada ammaanta Ilaaha weyn iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix" (Tiitos 2,13). Butros sidoo kale wuxuu ka hadlayaa “Ciise Masiix la muujiyey” (1 Butros 1,7: 13; eeg sidoo kale aayadda), sida John sameeyay (1 Yooxanaa 2,28). Sidoo kale waraaqda ku socota Cibraaniyada: Ciise wuxuu u muuqan doonaa "markii labaad" kuwa isaga sugaya badbaadada " (9,28). Waxaa jira cod weyn oo ah “amar” cod weyn, iyo “codkii malaa'igaha”, iyo buunka Ilaah. (2 Tesaloniika 4,16). Imaatinka labaad wuxuu noqdaa mid cad, wuxuu muuqdaa oo la maqlaa, wuxuu noqon doonaa mid aan muuqan.
Waxaa la socon doona laba dhacdo oo kale: sarakicidda iyo xukunka. Bawlos wuxuu qoray in kuwa dhintay lagu soo sarakicin doono Masiixa marka Rabbi yimaado, iyo in isla waqtigaas rumaystayaasha nool lagu soo kici doono hawada si ay ula kulmaan kuwa soo degaya Eebbe. (2 Tesaloniika 4,16: 17). Bawlos wuxuu qoray, "Sababtoo ah buunku wuu dhawaaqi doonaa, kuwa dhintayna waa la soo sara kicin doonaa, waana layna beddeli doonaa" (1 Korintos 15,52). Waxaan ku jirnaa isbadal - waxaan nahay "sharaf", xoog badan, aan dabacsanaan lahayn, aan dhiman karin iyo ruux ahaan (Aayadaha 42aad).
Matayos 24,31 wuxuu umuuqdaa inuu taas ku sharraxayo aragti kale: "Isaga [Masiix] wuxuu u soo diri doonaa malaa'igihiisa wata turumbooyin dhalaalaya, oo kuwuu doortay ayuu ka soo ururin doonaa afarta dabaylood, meesha ugu fog cirka ilaa geeska kale." Masaalka masaakiinta, Ciise wuxuu ku yidhi in dhamaadka da'da "uu u soo diri doono malaa'igihiisa oo waxay ka qaadi doonaan boqortooyadiisa waxkasta oo khasaaro ah, kuwa xumaanta sameeyana waxay ku tuuri doonaan foornada." (Matayos 13,40: 42).
«Maxaa yeelay waxay noqon doontaa in Wiilka Aadanahu ku yimaado ammaanta aabihiis isagoo la jooga malaa'igihiisa, markaasuu nin walba ugu abaalgudi doonaa siduu falay» (Matayos 16,27). Masaalka addoon aaminka ahu wuxuu ku jiraa soo celinta Rabbiga (Matayos 24,45: 51) iyo masaalkii dadka soo galay ayaa aaminay (Matayos 25,14: 30) sidoo kale xukunka.
Markuu Rabbi yimaado, Bawlos wuxuu qoray, "Isaguna wuxuu iftiin doonaa" waxa gudcurka ku qarsoon, wuuna muujin doonaa dadaalka wadnaha. Markaa qofkastoo Eebbe ha ku ammaaneen » (1 Korintos 4,5). Natürlich kennt Gott jeden Menschen schon, und insofern hat das Gericht schon lange vor Christi Wiederkunft stattgefunden. Aber es wird dann erstmals «öffentlich gemacht» und vor aller Ohren verkündet werden. Dass uns neues Leben geschenkt wird und dass wir belohnt werden, ist eine ungeheure Ermutigung. Am Schluss des «Auferstehungskapitels» ruft Paulus aus: «Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn» (1 Korintos 15,57: 58).
Si loo kicinayo xiisaha, macallimiinta wax sii sheegidda waxay jecel yihiin inay weydiiyaan: "Ma waxaan ku nool nahay maalmihii ugu dambeeyay?" Jawaabta saxda ah waa "haa" - oo waxay sax ahayd 2000 sano. Butros wuxuu soo xiganayaa wax sii sheegid ku saabsan maalmihii la soo dhaafay wuxuuna ku dabaqayaa waqtigiisa (Falimaha Rasuullada 2,16: 17), sidoo kale qoraaga warqaddu wuxuu u qoray Cibraaniyada (Cibraaniyada 1,2). Maalmihii ugu dambeeyay ayaa aad uga dheeraaday sida dadka qaar u maleeyaan. Dagaal iyo baahi ayaa bini-aadamku ku dhex dhacay kumanaan sano. Miyuu ka sii dari doonaa? Waxay u badan tahay. Intaa ka dib way fiicnaan kartaa ka dibna ka sii xumaan kartaa mar labaad. Ama waxay u fiicnaataa dadka qaarna xumaan dadka kale. Taariikhda oo dhan, “tilmaanta masiibada” ayaa kor iyo hoosba u socotay, waxayna u badan tahay inay taasi sii ahaato.
Mar labaad iyo mar labaad, si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah Masiixiyiinta ayaa u muuqday inaysan "ka liidan". Waxay u dhow yihiin harraad kadib dhibaatadii weynayd, oo lagu tilmaamay waqtiga degdega ee ugu xun ee abid weligiis jiri doona adduunka (Matayos 24,21). Waxay soo jiidatay ka gees ah, "xayawaan", "ninka dembiga leh" iyo cadowga kale ee Ilaah. Dhacdo kasta oo cabsi badan, waxay si joogto ah u arkaan calaamad muujinaysa in Masiixu dhowaan soo noqon doono.
Waa run in Ciise uu ahaa waqti dhib aad u daran (ama: dhibaato aad u daran) ayaa saadaaliyay (Matayos 24,21:70), laakiin inta badan wixii uu saadaaliyay waxaa lagu fuliyay go'doomintii Yeruusaalem. Ciise wuxuu xertiisii ​​uga digay waxyaalaha ay weli tahay inay iyagu isbaraan; tus. T. in ay lama huraan u ahayd dadka reer Yahuudiya inay u cararaan buuraha (V. 16).
Ciise wuxuu sii saadaaliyay waqtiyada degdega ah ee joogtada ah ilaa soo laabashada. Wuxuu yidhi: Adigu adduunka waad dhib badan tahay (Yooxanaa 16,33, tarjumaadda dadka). Qaar badan oo xertiisa ah ayaa naftooda u huray caqiidadooda xagga Ciise. Tijaabooyinku waxay qayb ka yihiin nolosha Masiixiyiinta; Ilaahay naga ilaaliya dhibaatooyinkayaga oo dhan (Falimaha Rasuullada 14,22:2; 3,12 Timoteyos 1:4,12; Butros). Xitaa markaa waqtigii Rasuullada, ka geestayaasha ayaa shaqeynayay (1 Yooxanaa 2,18:22 iyo 2; 7 Yooxanaa).
Ma dhibaato weyn baa la saadaaliyay mustaqbalka? Masiixiyiin badan ayaa rumeysan taas, iyo laga yaabee inay saxsan yihiin. Laakiin malaayiin Masiixiyiin ah oo adduunka ah ayaa mar horeba la silciyaa. Inbadan baa la dilay. Mid kasta oo ka mid ah, dhibku kama sii xumaan karo sidii hore. Muddo laba sano ah millennia cabsi badan ayaa soo gaadhay Masiixiyiinta. Laga yaabee in dhibaatadii weyneyd ay muddo dheer sii dheeraatay sida dad badani qabaan.
Waajibaadkayaga Masiixiyiinta ahi waa isku mid, bal inuu dhibku soo dhow yahay ama ha fogaado ama ha noqdo mid mar horeba bilaabmay. Sheegashada mustaqbalku kama caawinayso inaanu noqono kuwa kale oo Masiix ah, oo haddii loo adeegsado hab lagu cadaadiyo dadka inay toobad keenaan, waa lagu xadgudbay. Kuwa kahadlaya dhibaatada waxay u isticmaalayaan waqtigooda si liidata.
Muujintii 20 ayaa ka hadlaysa boqornimadii Masiixa ee Masiixa iyo quduusiinta. Masiixiyiinta qaar ayaa tan u fahmaya tan macno ahaan boqortooyo soconaysa kun sano oo Masiix aasaasay soo laabashadiisa. Masiixiyiinta kale waxay u arkaan "kunka sano" calaamad ahaan, inay tahay astaan ​​u ah boqornimadii Masiix ee kaniisadda, kahor soo laabashadiisa.
Lambarka kun waxaa loo adeegsan karaa calaamad ahaan Kitaabka Quduuska ah (Sharciga Kunoqoshadiisa 5; Sabuurradii 7,9), mana jirto wax caddayn ah oo ah in si macno ahaan loo qaato Muujintii. Muujintii waxaa lagu qoray qaab muuqaal aan caadi ahayn. Ma jiro buug kale oo Kitaabka Quduuska ah ka hadlaya oo ku saabsan boqortooyo xaddidan oo waqti lagu dhisayo soo laabashada Masiixa. Taa bedelkeeda, aayadaha sida Daanyeel 50,10:2,44 waxay soo jeedinayaan in boqortooyadu weligeed sii jiri doonto iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin 1000 sano ka dib.
Hadday jiri lahayd Boqortooyo kumanaan ah soo laabashada Masiixa ka dib, kuwa sharka leh waa la sara kicin doonaa oo waxaa la xukumi doonaa kun sano kuwa xaqa ah (Muujintii 20,5). Si kastaba ha noqotee, Maahmaahyadii Ciise ma soo jeedinayaan inay jirto faraq noocan oo kale ah waqtiga (Matayos 25,31: 46-5,28; Yooxanaa 29). Millenniumku qayb kama ahayn injiilka Masiixa. Bawlos wuxuu qoray in kuwa xaqa ah iyo kuwa aan cibaadada lahayn isla maalintaas la sara kicinayo (2 Tesaloniika 1,6: 10).
Sidee ayey noqon doontaa - daa'in? Kaliya waxaan ognahay in jajabyada (1 Korintos 13,9: 1; 3,2 Yooxanaa) maxaa yeelay dhammaan ereyadeena iyo fikirradeenna waxay ku saleysan yihiin adduunka maanta. Ciise wuxuu sharraxay abaalgudkayaga weligiis ah siyaabo dhowr ah: waxay la mid tahay helitaanka khasnad ama haysashada alaabo badan, ama inaad xukuntid boqortooyo, ama aadid xaflad aroos. Kuwani waa sharraxaadda qiyaasta keliya maxaa yeelay ma jiraan wax isbarbar dhigaya. Weligiisna aan la joogno Ilaah wuxuu noqon doonaa mid ka qurux badan sida ereyada oran kara.
David sidan ayuu u dhigay: «Hortaada, farxadu waa buuxsanaan iyo farxad ka farxiya midigtaada weligaa» (Sabuurradii 16,11). Qaybta ugu wanaagsan ee weligeed ahaanta waxay la noolaan doontaa Ilaah; sida loo noqdo; inaad isaga u aragto waxa uu runtii yahay; in la garto oo la garto isaga si ka wanaagsan (1 Yooxanaa 3,2). Tani waa himiladeena ugu dambeysa iyo dareenka Eebbe ku jeclaado, waana na qancin doonaa oo waxaan siin doonaa farxad weligeed ah.
Iyo 10.000 oo sano, oo tobannaan milyan ay inaga horreeyaan, waxaan dib u eegi doonnaa nolosheena maanta oo aan ku dhoola caddaynaynaa walwalkii aan qabnay oo waxaan la yaabnay sida ugu dhakhsaha badan ee Ilaah u qabtay shaqadiisa markii aan dhimanay. Waxay ahayd uun bilow oo dhammaadna ma jiri doono.